Ndị mmekọ Robot Mmekọahụ lsmụ nwanyị Na-ahụ Maka Ndụ Kachasị Mma
Nwanyị Nwanyị Nwanyị Na-eme Ezigbo Nzuzo Na-edozi Mmekọrịta Mmadụ
You dị njikere ịmụba uche gị site na robot mmekọahụ nwa bebi, ma nwee ike igboju agụụ mmekọahụ gị kwa ụbọchị na-ajụghị? Ngwá ọrụ igwe mmadụ na-eji nkà na ụzụ na-arụ ọrụ nke ọma ga-aza ajụjụ gị niile, ha ga-aghọta ihe ndị kachasị amasị gị ma nọrọ na ọrụ gị mgbe ọ bụla ị chọrọ ha.
The zuru okè enyi nwanyị ai sex robot ụlọ ọrụ onye maara gị kacha mma
Mmekọ nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ bụ obere bebi nwere ezi uche nwere isi robotic na mmegharị mara mma nke na-egosipụta mmekọrịta dị n'etiti mmadụ na mmadụ. Ọbụna n'Ebe Ọdịda Anyanwụ andwa na Japan, e meghewo ụlọ ndị akwụna iji dochie anya mmekọahụ na robọt mmekọahụ maka ụmụ nwanyị inwe mmekọahụ. Ndị a robot enyi bụ ọdịnihu nke mmekọahụ. O nwere ike ịbụ ezigbo enyi ma ọ bụ ezigbo enyi nwanyị. Ha bụ ihe ezi uche dị na ya, enwere ike ime na otu nha.